Xiaomi Mi Band 3 ayaa gaaraya hal milyan oo unug oo la iibiyay | Androidsis
Xiaomi waxay ku soo bandhigtay alaab aad u tiro badan dhacdadii ay ka dhacday 31-kii Maajo Waxaa ka mid ahaa jiilkeeda cusub ee jijimooyinka, Xiaomi Mi Band 3. Waa nooc cusub, oo hagaajiyay dhinacyo qaar marka loo eego jiilkii hore. 5-tii Juun waxaa lagu iibiyay Shiinaha toddobaadyadanna guul rasmi ah ayay ka gaadhay iibka.
Tan iyo 17 maalmood gudahood Xiaomi Mi Band 3 waxay ku iibisay hal milyan oo unug Shiinaha. Wax ay sumadda Shiinaha horay u xaqiijisay. Jaantus caddaynaya xiisaha halkaa ka jira ee jiilkan cusub ee jijimooyinka ka ah dalka. Iyo guul cusub oo astaanta ah.
Tan iyo markii ay si dhib yar ugu baahdeen 17 maalmood si ay u gaaraan tiradan iibka ah. Milyan-ka cutub ayaa loo qaybiyaa labada nooc ee Xiaomi Mi Band 3. Waxaa jira nooc leh NFC iyo mid kale oo aan lahayn dareemahan, waa farqiga u dhexeeya labadooda. In kasta oo aynaan ogeyn sida loo kala qaybiyo iibiyadan.
Laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaanay layaab ku noqon inay si fiican wax u iibinayaan. Sababtoo ah horeyba kahor intaan la bilaabin, Xiaomi Mi Band 3 wuxuu ku uruuriyay 610.000 boos celin Shiinaha. Markaa waxaa jiray daneyn badan oo ka timid dadweynaha ku nool waddanka Aasiya.
Iyada oo tirooyinkan iibka ah ay iska caddahay in jiilka cusub ee jijimooyinku ay guul u yihiin waddankaaga. Ka sokow, iyoMilyankan unug ayaa la gaadhay Juun 22, sidaa darteed waqtigan tirada ayaa kaliya kordhay. Xaqiiqdii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan iibka ayaa dhowaan la bixin doonaa.
Waa maxay Ma ogin illaa iyo hadda waa goorta Xiaomi Mi Band 3 ay imaan doonto suuqa caalamiga ah. Waxaa la filayaa inay si rasmi ah u bilaabi doonaan astaanta. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay weli iyagu ma laha taariikh cayiman. Marka waa inaan in yar sugno.
PS: Waad booqan kartaa boostadayadii ugu dambeysay ee ku saabsan sheygan, si badal luqadda Mi Band 3.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi Band 3 waxay iibisaa hal milyan oo maalmood 17 maalmood